ALIEXPRESS ပေါ်တွင်သင်၏ရေကြောင်းလိပ်စာဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို - ALIEXPRESS - 2019
လူတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားဂီတရိပ် မိ. ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုတန်ဖိုး, သော့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကောင်းစွာလုပ်နိုင်စွမ်းအထူးဖန်တီးမှုလယ်ပြင်၌အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်စေသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ဂီတအဘို့နားကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသိကြပါသလဲ? ဒီနေ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတော်မူမည်ဖြစ်သောအထူးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရကိုဆက်ကပ်။
ဂီတနားကိုစစ်ဆေးခြင်းသက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုဖြတ်သန်းနေဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်။ သူတို့တစ်ဦးစီတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား layout ကိုရှိပြီး, ထိုသေံခွဲခြားမှတ်စုများ၏ဖွဲ့စည်းမှုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်းဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ Next ကိုကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုဥပမာ web အရင်းအမြစ်မှာကြည့်ပါ။
Method ကို 1: DJsensor
DJsensor site ပေါ်တွင်ဂီတဘာသာရပ်များမှကြွလာသည်ဟုအချက်အလက်များ၏ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယခုကျွန်တော်တစ်ဦးအကြားအာရုံစမ်းသပ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool ကိုအရပ်၌တစ်ဦးတည်းသာအပိုင်းတွင်, လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖြစ်ပါသည်:
စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ site ၏ DJsensor စာမျက်နှာကိုသွားအထက်လင့်များကိုသုံးပါ။ လျှောက်လွှာများ၏ဖော်ပြချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, အဲဒီနောက် link ကို click နှိပ်ပြီး "ဒီနေရာမှာ".
သင့်အနေဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆို၏နိယာမများကပြောပြသည်လိမ့်မည်။ ဖတ်ရှုပြီးနောက်, တံဆိပ်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
ရှုပ်ထွေးမှုလိုချင်သောအဆင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ရမှတ်ခန့်မှန်းဖို့ရွေးချယ်စရာများ၏အကွာအဝေးပိုမိုကြီးမားဖြစ်လာသည်။ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီနေရာမှာ"သငျသညျမှတ်စုနှင့် octaves ကဲ့သို့သောအယူအဆများကိုဖြတ်ပြီးလာဖူးဘူးပါ။
စမ်းသပ်မှုစတင်ပါရန်, တံဆိပ်များကို click "စတင်".
အပေါ် LMB ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သီချင်းနားထောင် Start "သတိပေးချက်: စမ်းသပ်မှတ်စု Listen"။ ထိုအခါသင်သည်သတင်းထောက်တစ်ဦးမှတ်ချက်ကိုကြားထင်သော key ကို select လုပ်ပါ။
သငျသညျအသီးအသီးမှတ်ချက်အဆိုပါ octaves အတူတူပင်ဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်သာပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်, ငါးစမ်းသပ်မှုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ဂီတသင်္ကေတအနည်းဆုံးအခြေခံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကလူတိုင်းမ, စမ်းသပ်ခြင်းဒီလိုမျိုးကိုက်ညီ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့အခြားအင်တာနက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Method ကို 2: AllForChildren
AllForChildren site ကို "ကလေးများအဘို့အားလုံး" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်အမည်ပြောပါ။ သို့သော်ကျနော်တို့ကတစ်လောကလုံးနှင့်သားသမီးတို့အဘို့အထူးချုပ်ထားမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စမ်းသပ်မဆိုအသက်အရွယ်နှင့်လိင်၏လူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်ရှေးပါပွီ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကို web service ကိုပေါ်ဂီတကိုအဘို့နားကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပါ home page ကိုဖွင့်ပါတိုးချဲ့နှင့် AllForChildren "Scrabble"selection ရသော "စမ်းသပ်မှု".
ဆင်း tab ကိုပေါ်ကဆင်း Get နှင့်သွားပါ "ဂီတစမ်းသပ်မှု".
စမ်းသပ်ခြင်း၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ Start, အဲဒီနောက်စမ်းသပ် run ။
နှစ်ခုအဆိုပြုထားဖွဲ့စည်းမှုကိုနားထောင်, ပြီးတော့သင့်လျော်သော button ကိုရွေးချယ်ပြီး, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုကလစ်နှိပ်ပါလုံးဝတူညီကြသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်နှိုင်းယှဉ် 36 ဖြစ်ပါတယ်။
volume ကိုမလုံလောကျပါကကိုထိန်းညှိဖို့အထူး slider ကိုအသုံးပြုပါ။
စမ်းသပ်မှုပြီးစီးအပေါ်သို့သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အတွက်ဖြည့်ပါ - ဒီကပိုတိကျဖွစျဖို့ဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။
စာရင်းဇယားများ၏တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ပါ - အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြားနိုင်ကြသည်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
သူတို့မှတ်စုသာစုံတွဲတစ်တွဲအားဖြင့်ကွာခြား - - နေတုန်းပဲ, ငါတို့တစ်ခါတစ်ရံကျမ်းပိုဒ်အတော်လေးရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါတစ်ဦးသံသယမရှိဘဲဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်လူကြီးများလည်းစာမေးပွဲဖြေဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်။
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအတွက်မှတ်ချက်စာသားကို Set နှင့်တည်းဖြတ်
ဗီဒီယို Watch: ОГРОМНАЯ КУЧА ПОСЫЛОК С ALIEXPRESS! ЧТО ВНУТРИ? (သြဂုတ်လ 2019).